China IP65 LED Box သည် Light Box ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများအတွက်မှန်ဘီလူးဖြင့်တင်းကျပ်သော Bar ကိုအလင်းပေးသည် - DiGuang
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > LED မီး Box ကိုအလင်းရောင် > တင်းကျပ်ဘား LED > IP65 သည် LED မီးအလင်းတွင်မှန်ဘီလူးဖြင့်တင်းကျပ်သောဘားကိုထွန်းသည်
အလင်းသေတ္တာအတွက်မှန်ဘီလူးပါသော IP65 LED တောင့်တင်းဘားမီးသည်ပြင်ပကြော်ငြာထည်အလင်းသေတ္တာအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ စဉ်ဆက်မပြတ်လက်ရှိဒီဇိုင်းနှင့်အတူ AC 185-265V input ကို, 172 ဒီဂရီ PMMA ကျယ်ပြန့် optical မှန်ဘီလူးပျော့, ကြီးမားသောandရိယာနှင့်ယူနီဖောင်း illumination ပေး။ 4000V မြင့်မားသောကာကွယ်မှုက၎င်းကိုသက်တမ်းရှည်စွာဖြင့်လုံခြုံစေသည်။
အလင်းရောင်သေတ္တာအတွက်မှန်ဘီလူးပါသော IP65 LED တောင့်တင်းဘားမီးများသည်အမြဲတမ်းလက်ရှိနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအင်္ဂါရပ်များပါသောအပြင်ဘက်နောက်ခံကြော်ငြာမီးအလင်းရောင်အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ လွတ်လပ်သောဂိတ်ဒရိုက်မောင်းဒီဇိုင်းနှင့် 4000V မြင့်တက်သောအကာအကွယ်။ ၁၇၂ ဒီဂရီအကျယ်ထောင့်မြင်ကွင်းမှန်ဘီလူးသည်ကြော်ငြာခြင်းနှင့်ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များအတွက်တစ်ပြိုင်တည်း illumination ပေးသည်။
တစ်ခုတည်းသောဘေးထွက်ကြော်ငြာသေတ္တာထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများအတွက်အသင့်တော်ဆုံး LED မီးတင်းဘားမီးများထဲမှတစ်ခုအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးရှိသောထုတ်ကုန်များနှင့်စိတ်ကြိုက် ၀ န်ဆောင်မှုကိုခံယူထားပါသည်။
16pcs SMD3030 LED, စိတ်ကြိုက်
6000 - 7000K, စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်
1000 x17 x ကို 1.0
AC185 ~ 265V
2. IP65 LED တောင့်တင်းဘားမီးလုံးသည်အလင်းသေတ္တာအတွက်မှန်ဘီလူးပါရှိသည်။
ပျမ်းမျှအလင်းဖြန့်ဖြူးမှု ၃.၁၂ ဒီဂရီအကျယ် ၁၇၂ ဒီဂရီ၊
ပြင်ပမှအသုံးပြုရန်အတွက် 4000V မြင့်တက်သောကာကွယ်မှု၊
၆။ ၁၅ စင်တီမီတာအနက်ရှိအပြင်ဘက်တစ်လုံးထည်အလင်းသေတ္တာအတွက် ၆ ။
1.6- 15cm အထူနောက်ကျော -lit ကြော်ငြာအလင်း box ကို;
၂။ မီးသေတ္တာအလင်းရောင်၊ ဆိုင်းဘုတ်များနှင့်အလှဆင်ထားသောအလင်းရောင်များကိုကြော်ငြာခြင်းအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ လေဆိပ်၊ မြေအောက်ရထား၊ ဘတ်စ်ကားဂိတ်၊ အဆောက်အအုံနှင့်အခြားတစ်ဖက်၏နောက်ဘက်အလင်းရောင်စသည်တို့ဖြစ်သည်။
Diguang LED သည်အလင်းသေတ္တာအတွက်မှန်ဘီလူးပါသော IP65 LED တင်းတင်းဘားမီးများအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိဖောက်သည်များနှင့်ပူးပေါင်းပြီးအများစုမှာဥရောပ၊ မြောက်အမေရိက၊ အာရှနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းတို့တွင်တည်ရှိသည်။ Light Box တွင်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိသည်။
hot Tags:: IP65 LED Rigid Bar ဘားသည်မီးပွိုင့်၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကားရောင်း၊ ၀ ယ်ရန်၊ စက်ရုံ၊